Toekarena sy Fandraharahàna · Febroary, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Toekarena sy Fandraharahàna · Febroary, 2014
Tantara mikasika ny Toekarena sy Fandraharahàna tamin'ny Febroary, 2014
Bilaogera Indiana Mampiharihary Ny Fomba Fangalaran-dasantsy Tamin'ny Alalan'ny Lahatsary
Azia Atsimo 27 Febroary 2014
Fanao ratsy mihanaka eny amin'ny ankamaroan'ireo tobin-dasantsy ao amin'ny firenena ny fangalarana, izay mila hiadiana amin'izao fotoanan'ny vidin-dasantsy miakatra izao.
Madagasikara Mbola Miandry Praiminisitra, Governemanta Vaovao
Afrika Mainty 26 Febroary 2014
Feno katroka ny volana raha nandray ny toerana mahafiloham-panjakana vaovao eto Madagasikara azy ny filoha voafidy Hery Rajaonarimampianina, mbola tsy misy ny marika ahafantarana izay ho praiminisitra vaovao ary governemanta manao ahoana no hatsangany. Mandresy lahatra ny Ma-Laza fa ny tena olana tsy any amin'ny fahafantarana izay ho praiminisitra fa...
Mpanao Sariitatra Alzeriana Miatrika 18 Volana An-tranomaizina Satria Voalaza Fa Nanimbazimba Ny Filoha
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Febroary 2014
Miatrika sazy 18 volana an-tranomaizaina i Ghanem noho ny sariitatra iray mbola tsy navoaka misy ny sarin'ny filoha Alzeriana, Abdelaziz Bouteflika ary nolazain'ny manampahefana fa manaraby azy.
Arzantina: ‘Ampitombointsika’ Ny Fandrosoana Sa Ny Kolikoly ?
Amerika Latina 11 Febroary 2014
Nanambara fampitomboana ny fisotroan-dronono sy ny vatsim-pianarana ny Filoha Fernández , niteraka ny tenifototra hoe #Aumentamos (ampitombointsika), izay nentin'ireo mpampiasa twitter mba hanomezany ny kaontin-dry zareo manokana momba izay 'nisondrotra' tao amin'ny fireneny
Mitaky Ny Hampitsaharana Fifampiraharahana Ara-barotra Feno Kolikoly Sy Tsy Ara-drariny Ny Yemenita
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 11 Febroary 2014
Niverina nidina an-dalambe ireo Yemenita mba hitaky ny harem-pireneny.
Niverina Tao An-drenivohitr'i Kambodza Ny Fiaram-pitaterana Iombonana
Azia Atsinanana 11 Febroary 2014
Eo am-panandramana ny fampiasana fiara iombonana i Phnom Penh mba handresena lahatra ireo mponina mpandeha moto taxi hampiasa fiaram-pitateram-bahoaka. Tamin'ny taona 2001 no napetraka voalohany tao an-drenivohitra ny fiara iombonana saingy tsy nahomby izany
Tafiditra Amin'ny Fisolokiana An-telefonina ny Laharana Avy Any Karaiba
Karaiba 08 Febroary 2014
Ampiasaina hanaovan-tsoloky amin'ny alalan'ny "maneno tokana" ny laharan-telefonina avy any Karaiba amin'izao fotoana izao; Mampiasa ny fitaovam-pampahalalam-baovao sosialy ny mpiserasera hitaraina sy hampitandrina ny hafa momba ny fanjonoam-bola.
Vola Bebe Kokoa, Olana Bebe kokoa ? Manokatra Ny Varavarany Ho Amin'ny Fandraharahana Shinoa Misimisy kokoa i Taiwan
Azia Atsinanana 08 Febroary 2014
Na dia tsena lehibe ho an'ny Fandraharana ao Taiwan aza i Shina, maro ihany ireo miahiahy ny amin'ny mety hisian'ny voka-dratsy eo amin'ny kolontsaina, eo amin'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fiandrianam-pirenena amin'ny fanalalahana ny renivola miasa ao.
Bilaogera Namoaka Ny Tranonkalan'ny Kolikoly Momba an'i Sochi
Eoropa Afovoany & Atsinanana 08 Febroary 2014
Niditra tamin'ny fanentanana iadiana amin'ny kolikoly ny Rosiana mpitarika ny fanoherana sy mpikatroka miady amin'ny kolikoly sady bilaogera Alexei Navalny, tamin'ny famoahana tranonkala ahafahan'ny olona sy ny milina mifampitafa ka navoitrany tao ny nantsoiny ho ny "fandaniana marina" tamin'ny fikarakarana ny olaimpikan'i Sochi.
Mitohy Mandrak'Ankehitriny Ny Asa Ao Amin'ny Lakandranon'i Panama
Panamà 07 Febroary 2014
Manohy ny asany ao amin'ny Lakandranon'i Panama ny GUPC na dia eo aza ny fandrahonany hampianto ny asa fanamboarana. Ao anatin'izany, manara-maso ny orinasa (GUPC) ny Manampahefana misahana ny Lakandrano.